Oge ịgba ịnyịnya ígwè 30 ga-ezu? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Productsgba ngwaahịa - ajụjụ nkịtị
Productsgba ngwaahịa - ajụjụ nkịtị
Ridnya ịnyịnya nwere ike ịnwe ụdị n'ụdị na nha niile, mana ọ bụrụ na enwere gị oge maka oge ị nwere ike iwulite njem kwesịrị ekwesị na nkeji 30. Anyị chere na anyị ga-anwale ma hụ ma anyị ga - enweta ezigbo njem naanị ọkara awa, were nyocha na ngwa gcn nke ị na - ahọrọ. Ebe ọ bụ na ọnọdụ abụghị otu maka onye ọ bụla, anyị ga-egosi gị ụfọdụ ezigbo ndụ ihe atụ nke ihe anyị dịka gcm moderators na-eme mgbe anyị nwere naanị 30 nkeji iji mee itapenlets gocycling akpụkpọ ụkwụ 30 nkeji nke na-adịchaghị ogologo iji nweta otu na-agba n'okporo ụzọ.
Echere m na ọ ga-ewe m nkeji 30 ka m wee si n'ọnụ ụzọ m jiri ihe m na-apụ na Mypike, nke ahụ ga-abụ ihe na-enweghị isi maka m ezigbo nnọkọ na nkeji 30 na turbo na-agbanwe ma na-asa ahụ mgbe obere oge. 2040 na m ga - eme nke a oge niile enwere ike iji obi ọkụ na nwayọ wee chee na m nwere ike ịme 10-15 nke m ga - eme ka a hazie ya ka m wee gaa dozie ngwa m na nke m igwe kwụ otu ebe dị njikere ọfụma m chere na nke a bụ ihe kachasị ọsọ m megharịrị obere karịa nkeji abụọ gara aga ma oge ahụ araparala n'ime ebe m na-adọba ụgbọala, echere m ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkeji anọ mana m ga-eche na m ga-agbanyeriri onye ahụ ofufe, n'ihi na ọ dị m dị ka ọ na-ekpo ọkụ nke ọma ka m wee gbanye nke a, ọ dị mma, yabụ ugbu a, m nọ na-ekpo ọkụ maka nkeji anọ na 30 sekọnd, enwetara m ic 20 sekọnd tupu h amalite mgbalị mbụ m chere na ọ dị ugbu a ọ bụ oge m nwetụ obere nrụgide m na-ekwu na enweghị m ezigbo ọkụ m na-enwekarị minit 10-15 mana mana echere m na anyị ga-abata gaa na akụ ndị mbụ a, m ga-ewere ha na mbido dị ntakịrị ma anyị banye n'ime ya ka m nwee sekọnd anọ ka m wee pụọ karịa oge anaghị m ama ụbọchị ọ bụla n'izu ọ bụ ya nye m Nkeji 30 ma ịmara na ọ ga-abụ oriri etipịa ma ọ bụ oyi n'èzí ma achọghị m ịpụ n'èzí Anọ m ebe a ogologo oge ma ọ bụ na enwere m ihe jikọrọ m na ezinụlọ m maara na m ga-eme ya ngwa ngwa ka m wee ọ na-abụkarị na m kwesịrị ịgbanye okporo ụzọ iji banye na mpaghara ahụ gbanwee uwe m, anyị ga-akụ ya, anyị ga-akụ aka n'ọnụ ụzọ ahụ ozugbo m si n'ọnụ ụzọ pụta, enweghị ọgbaghara ihe dị ka nkeji abụọ na atọ iji fụchie ụkwụ m. iji kpoo m ọkụ, mee ya na igwe kwụ otu ebe nke ọma wee were otu obi si 120 gaa 140 maka nkeji ise ka ịgagharị ka m nwee ike ịkwadebe maka mgbatị m ga-eme, yabụ anyị nwere nkeji atọ iji pịa ngụsị oge iji bilie. Maka nkeji ise sochirinụ Achọrọ m ịnọgide na-enwe ọmarịcha ihu ọchị achọghị m ịkpaghasị akwara ahụ nke ukwuu, ọkachasị mgbe ị na-enweghị oge buru ibu, ị chọghị ilekwasị anya n'ịmụta Biggear iji nweta obi elu dị elu site n'ọnụ ụzọ ámá ị chọrọ ka ị na-agba ọsọ na cadence na-arụ ọrụ dị elu na usoro obi na ọ bụchaghị na-echegbu ahụ dum nke na-abịa n'oge na-adịghị anya na nkeji ole na ole ga-adaba na 30 min ọ ga-esiri ike mana Echere m na ọ bụ ihe kwere omume ma achọrọ m iji nke a dị ka ohere ịnweta ọmarịcha ịnyịnya ígwè, gbasaa ụkwụ m, na-eme ngụgụ m, bụrụ otu na okike, oge udo dị n'etiti ọrụ ike na-agwụ ike ụbọchị ee ee mybọchị m dị ike, ha ka mma, gbanwere. Jidesie ike, ịnọghị ebe a, lepụ anya maka ihe mkpuchi nke okpu nzuzo nke abụọ, adịla m njikere, apụla m, apụla m n'ọnụ ụzọ, ana m apụ n'èzí oh na-adị m mma apụ ugbu a, o were m nkeji abụọ iji kwadebe n'ihi na m bepụ ihe niile jọgburu dị-kit si n'ọnụ ụzọ na igwe kwụ otu ebe m kwere onwe m 13 nkeji oge ịkwọ ụgbọala na m ga-eme otu ụzọ n'okporo ámá m, m wee mee nke a n'ihi na achọghị m ịhọrọ akaghị aka nwere ike ịdị ogologo karịa ka ọ nwere ike ịdị na akwụkwọ, yana n'ihi na ọ pụtara na amaara m na m ga-atụgharị ma laghachi azụ ka m wee nwee ike ịlaghachi n'oge, yabụ ọ bụrụ na m mee 30 Nkeji? na otu direction 13 nkeji azụ na nke ahụ bụ 26 nkeji ngụkọta njem oge ya mere m nwere ndị abụọ nkeji njikere iji kwadebe, ekwe m abụọ ọzọ nkeji ịgbanwe mgbe e mesịrị n'ihi na m nwere a dị nnọọ mkpa nzukọ mgbe ahụ, otú ahụ ka m ga-ahụ na m ' Aga m alaghachi n'oge ka onye ọ bụla wee nọrọ n'ọnọdụ dị mma ịnwe njem dị oke elu na nkeji 2026 nkeji oge ịkwọ ụgbọala m gbanahụrụ ọkara elekere m gbapụrụ akpụkpọ ụkwụ igwe kwụ otu ebe mana echeghị m na m kpebiri ide a abụ banyere ya iji dee m nwere mmiri mmiri mgbochi mmiri mmiri akpụkpọ ụkwụ ma chọọ n'ezie ka m bụrụ abụ maka ncha ahụ m na-eme nkeji iri atọ, m ga-apụ n'èzí wee gbagoo n'ugwu ụfọdụ n'ebe a na-asa ahụ ebe m bi n'ihi na ha dị nso n'ezie ka m nwere ike inwe olile anya mee ezigbo nkeji 10 nke vo2 max mgbatị na windo a, gịnị ka m ga-eme? n'ihi na ọ na-ewe m 10 nkeji iji kwadebe, yabụ enwere m naanị nkeji 20 ka m rịgoro inutes, nkezi bụ 10, o siri ike, mana echere m na m nwere ike ịme nnabata abụọ dị mma ebe a, ihe dịka 380 400 watts wee bụrụ ihe dị ka nkeji 10 n'ụdị okwu a nke vo2 max a na-ekwu okwu ya bụ na m nọ na turbo 19 na ọkara nkeji ugbu a, m kwụsịrị ịgụta mbọ 20 m gbalịsiri ike ma m bidoro na-eteta, m swearụọ iyi, obi m na-arị elu, yabụ enwere m ezigbo mgbatị ahụ echere m Enwere m ike karịa na nke ahụ ga-apụta nkeji ise ọzọ oh mba m ga-ajụkwa ee ee ise ọzọ ma nkeji abụọ nke cooldown n'ezie gbanwere ụkwụ m wee hụ ma m ga - agagharị naanị nkeji atọ nke ga - abụ naanị ihe niile dịkwa mma ka anyị mee obere mbọ, m chọrọ ugbu a, mana m na-aga n'okporo ụzọ maka ọfụma, ọ dị mfe minit iri Sin n'Ezie, emechara m onwe m ebe a na nke abụọ, na-eme nzaghachi m nke abụọ na elekere na-aga. Nkeji 26 nke pụtara na enwere m nkeji anọ ka m laru ma gbanwere nke ahụ bụ nzuzu echiche oh go doh, ọ kaara m mma ka m jiggle nke ukwuu maka a downokay dị jụụ nke mere na agaghị m aga n'ụzọ maka nkeji asaa mana echere m na m ga-akwụsị n'ihi na achọtara m ọmarịcha bekee.
Echere m na m na-abịakarị ebe a n'oge mgbụsị akwụkwọ iji kpọpụta ha ka ọ bụrụ n'oge na-adịghị anya iji mee ihe n'eziokwu na achọpụtara m ebe a, m ga-akwụsị ma hụ m ga-anwale ha ezigbo kemmiri ihe mana ntakịrị ihe na-ewute ya. apụ na ha nwere ike ịhapụ ịhapụ obere oge izu abụọ, echere m na ọ dị mma ịmara agbanyeghị m ịgbawa nke ọma n'ihi na nke a na-eri obere oge dị oke ọnụ, enwere m ọchioma ịnwe nke a dị ka obere njem dị egwu n'oge oge nri ehihie m ịgwa gị Ugwu bu ugwu di elu adighi eleda ya anya nke oma, emere m ya na etiti Myride na Carrick na uwe elu ma dikwa na akwa n'elu oke osimiri ugbua ma dika i gha ahuta uzo di egwu nke di ebe a, osimiri di nma fụrụ akpụ m kwesịrị ịsị na anyị nwere nnukwu mmiri ozuzo ya mere ọ dị mma gbara ọchịchịrị Own red ndị a dara ogbenye ụmụ okorobịa nwere a bit nke ya na mberede, echela na ọ ga-enweta ụgbọ epeepe na ọkara elekere ọkara otu awa oh m nwetara furu efu ntakịrị, ọ ga-akara m mma ịlaghachi n'ihi na ọfụma, yabụ ụzọ gasị na-ekwu okwu dị oke mkpa na ịbụ h onest na enwere m ntakịrị ihe m bu maka ibili Downsiskin ugwu ọ na-ewe m 30 nkeji iji rute ebe a na mgbe m na-alaghachi, ọ dị elu, nke ahụ adịghị na atụmatụ m, echeghị m banyere ya, enweghị m echiche niile ma m ga-agagharị ma ọ bụrụ na m ga-eme nzukọ a n'ihi na ọ bụ nzukọ dị mkpa30 nkeji nwetara ihe niile ziri ezi ka m mechara okwu ahụ nkeji abụọ n'ọnụ ụzọ ikpeazụ 30 sekọnd m ga-akụsi ike na m ga-ewe abụọ nkeji ezumike, 30 sekọnd niile outokay, otú mbụ na nke abụọ nkeji na-eme, ugbu a, m nwere nkeji abụọ free na m nwere ihu ọma dị na-aga na-ajụkwa, mgbe ahụ, m ga-eme ya ọzọ, ọzọ abụọ nkeji. Abịara m ebe a n'olulu ájá a ka m wee nwee ike ịrụ ọrụ dị mma, ọ na-atọ ụtọ ma na-ekpori m ọchị n'ihi na ọ na-atọ m ụtọ itinye oge 30 ụbọchị m, ikekwe ka ọtụtụ n'ime gị na-apụ n'okporo ụzọ ọ dịghị mkpa, yabụ enwere m sekọnd 60 ka m zuru ike, mgbe ahụ, m ga-emekwu ọrụ abụọ ọzọ na nkeji abụọ, mgbe ahụ, m ga-arụkwa ọrụ igwe kwụ otu ebe, nke ọma, ka anyị bido na Nke abụọ n'otu ebe a, anyị nwere nke abụọ nke emegoro, anyị ka nwere nkeji abụọ ma aga m akụ maka usoro ikpeazụ m nke ụzọ mbata Vo2 ahụ na enweghị m nnukwu ihe iji cheta nnọkọ a chọrọ akụrụngwa m akpụkpọ ụkwụ m igwe kwụ otu ebe echefuru m ogwugwu onu ogugu ato kariri m nwere ike ime ya ike na m nwere ike ịkpọ ala m ga-akwado mgbe niile ka ị na-eme ezigbo ọkụ ma na-akpọ ezigbo oku ekwentị mgbe ọ bụla ị na-eme nnọkọ dị ka nke a ma mana echere m na m nwetara ya site na njedebe ya mana o doro anya na ezighi ezi m ịbịaru 27 nkeji ma achọpụtara m na nkeji nkeji abụọ mgbe sessio dị otú ahụ n adighi ogologo oge maka ukwu m ka na-enwu oku, obim obim ka di ocha ma oburu na m puru ugbua ukwu m ga akpo m echi, ya mere agam ano na turbo maka oge ole ma ole ka obi juo m nma. Agaghị m enwe ihe mgbu ma emechaa, mana gịnị ka m chere, nkeji atọ iji pụọ wee saa ahụ? O wee pụta na atụghị m atụmatụ nke ọma na m ga-esi ike ka m nwere ike ịlaghachi n'ụlọ megide Hillah Power na ya mere ndị etiti oge na-eme, ugbu a ọ bụ oge ime ihe kwụsịrị ọrụ igwe kwụ otu ebe ma ọ bụrụ na m na-adọba igwe kwụ otu ebe ma ugbu a, m ga - ewepụta 20 sekọnd ọzọ ka m na - arụ ọrụ m ga - alaghachi ugbu a, m ga - aga n'ihu na mbọ a, ugbu a, otu ọzọ, enwere m ọrịa, huhso maka ihe niile ahụ enwere m mpaghara m bi na - anaghị apụ apụ agabeghị ezi n'ụlọ, enwere m mbọ ikpeazụ m ga - eme, aga m eme nke a n'akụkụ ụzọ mgbe m na - alaghachi n'ụlọ m Ọ dị mma, ugbu a 20 sekọnd ziri ezi, agbalịrị m ịnwale ya na ịrịgo na m na-achọ ime ụlọ m ugbu a, m na-eche na m na ndị doro anya na m nwere 25 nkeji nke na-akwọ ụgbọala oge otú ahụ ka m nwere atọ nkeji iji n'ụlọ, nkeji abụọ, ka agbanwee, na mgbe ahụ bi m azụ na na-arụ ọrụ na ọkara otu awa ya mere ugbu a, m obi ike na m ga-ahụ ya na m oche otú m mere nnọọ nzukọ m na m nwere ike ọ bụghị mere ndị kasị The Epic njem, ma ị maara ihe ọ dịghị mkpa n'ihi na m ' m apụ Enwere m ikuku ọhụrụ na amachago m dị mma karịa ihe ọ bụla mgbe ụfọdụ na ndụ anyị anaghị eme ihe ọ bụla n'ihi na anyị enweghị ike ịme ihe niile anyị ga - eme karịa karịa ịme obere ihe ma ị maara, oge ụfọdụ niile ị ghaghị ime dị mfe ịpụ ebe ahụ, ịgbagọ ụkwụ gị ma nwaa ya na nke ahụ bụ ikike anwansi ka m wee laghachi azụ wee wuo ya niile n'ime njem m ka m wee laghachi n'oche m n'ihe dị ka nkeji ma ama m '' ugbua enwetala m nkeji nke atọ - Emeela ka m dị ọkụ m mere obere ọsọ m dị obere m mere m nkeji abụọ na nkeji abụọ site na igwe kwụ otu ebe ma jiri ọsọ na-agba ọsọ ugbu a, m ga-eme obere ka nter Sprint kwụsị nke ikpeazụ a. ya 3 0 nkeji na m dị ka ma ọ bụrụ na i nwere ike wụpụ si n'ebe ahụ mee ka obi dị gị mma ị ga-enweta ọbara na-aga na ụbụrụ gị ị ga-enwe mmetụta dị oke mma ị ga-enwe ọfụma ị nwere ihe dị ntakịrị karịa ihe ọ bụla bụ ihe ọ bụla ihe ikwu nwere fun jide n'aka na-ekele gị maka na-achọ na niile. Echere na ị nwere mmasị na nke a ma enwere m olileanya na ọ ga - eme ka mmụọ nsọ gị banye n'ụgbọ ịnyịnya gị wee nwee ọ enjoyụ na obere ụgbọ mmiri ndị a, mana biko mee ka anyị mara na ihe ndị a n'okpuru ma ọ bụ mgbatị kachasị amasị ma ọ bụ obere ụgbọ ala kachasị amasị m dịka m ga - achọ ịnụ site na gị anyị niile na-eme na biko ka anyị mara na ihe ngalaba n'okpuru, ugbu a, m na-achọ ịnụ gị n'ike mmụọ nsọ, m ka mma laghachi nzukọ m n'ihi na m dị nnọọ jụrụ ya na-enwe fun ịnya
Kedu ngwa ndị m chọrọ maka ịgba ịnyịnya ígwè?
Okporo ụzọBike Ngwa: Ihe.MkpaIbido
Okpu agha. Okpu agha na-echebe ihe kachasị mkpa anyị nwere na-enweghị oke oke egwu, ikpu okpu agha akwadoro, nke dabara adaba nwere ike ịbụ ọdịiche dị n'etiti ịlanarị mkpọka ma ọ bụ na ọ bụghị.
Ugogbe anya maka anwụ.
Bidons & ngị ngị.
Ọ bụghị ihe niile ịgba ịnyịnya agha ga-eri aka na ụkwụ. Echere m na, ị gaghị enwe ike kwalite gị igwe kwụ otu ebe na gia na-enweghị na-agbasa akụ. Ke ibuotikọ emi, M ga-eje ije site na ụfọdụ nke ihe ndị kasị oké ọnụ ihe ị pụrụ ịzụta na ndị oké uru maka ego. (egwu dị egwu) Ọ dị mma, ka anyị jiri ihe ọtụtụ n'ime gị mara nke ọma, ngwa ekwentị nwere ike ịbụ ngwa ngwa igwe kwụ otu ebe.
akpa ume akpa ume
Dịka ọmụmaatụ, Komoot bụ ngwa ngagharị na ụzọ na-eme ka ibe ahụ na-akụ. Mana enwere ọtụtụ ndị ọzọ n’ebe ahụ. Dị ka ihe atụ Strava enweghị n'ezie inwe otu na igwe kwụ otu ebe na kọmputa.
Na-ada ka echiche. (upbeat music) Ya mere, ibudatara ma wụnye ngwa gị. Ee, m ga-enyere nne nne m aka ịwụnye nke ya.
Ma ugbu a, ịchọrọ itinye ya n'ọrụ na ụzọ emeghe. Ma m na-ekwu, ee, ọ dabara n ’akpa azụ gị mana ị gaghị achọ ka ọ nọdụ ala? Nke a bụ ebe ọ na-abịa kemfe. Onye na-ejide ekwentị na njikwa ahụ.
Igwe ekwentị ma ọ bụ ugwu nwere ike igosi anya, ọsọ na oge gị na ngwa dị mma yana ị nwere ike ilele isiokwu GCN. Mba, enwere m ike ịgaghị akwado ya. Onwe m, m ka ga-aga maka ugwu GPS.
Ma, a naghị agbagha agbagha na nke a bụ ụzọ dị ọnụ ala karịa. latex, mba, obughi udi latex. M na-ekwu na bike-kpọmkwem latex.
Ana m ekwu banyere latex tubes. Ọ bụghị naanị na ha dị ọnụ ala, mana ha na-ebelata nkwụsi ike. Nke ahụ pụtara na ị nwere ike ịchekwa ihe ruru 10 VOTS.
So paụnd maka paụnd, nke a bụ ụzọ dị ọnụ ala ma dị irè iji kwalite igwe kwụ otu ebe gị. (Egwu oma) Number nke ano. Ọbụghị naanị na ọ bụ ngwa ejiji.
Ma ọ dịkwa mma maka mmiri, oyi, na anwụ anwụ. Ana m ekwu banyere akpati abụghị ihe kachasị ejiji. Maka ndị na-abụghị ndị ịnyịnya ígwè, ịbanye n'elu ndụmọdụ ndụmọdụ GQ abụghị ihe dị mma.
Mana ọ bara ezigbo uru. Ezigbo ajụjụ bụ, piq ue ala ma ọ bụ elu? (egwu dị egwu) Site na ọkụ igwe kwụ otu ebe. Ana m ekwu maka ọkụ na azụ.
A na-eleghara ndị a anya ugbu a maka ndị na-anaghị anya ụgbọala n'ọchịchịrị. Ma ha bụ ngwa dị oke egwu. Karịsịa, iji chebe gị, n'agbanyeghị ọnọdụ gị.
I nweghi ike iburu ihe ndia maka otutu ego. Ee ee, maka anyị ebe a na UK ebe ihu igwe anaghị atụkwasị obi. Ọ bụ ngwa zuru oke. (egwu dị egwu) Ihe ọzọ anyị ga - ekwu maka ya bụ ngwaọrụ dị iche iche.
Super bara uru inwe na gị igwe kwụ otu ebe. Ọ nwere ike ịrụzi, gbanwee, bulie, igwe ọrụ dị iche iche emee ya niile. Ọ bụ obere ego ị ga-akwụ iji nwee ike idozi igwe kwụ otu ebe gị. (Joy Music) Onye na-echekwa ịnyịnya ibu, ka anyị chee ya ihu, ọ dịghị ihe dị njọ karịa ịnwe ịnyịnya ibu mmiri.
Ọfọn, n'ezie ana m atụfu ihe ole na ole a. Mana agbanyeghị, ị nweta ịnyịnya ibu gị, ọ bụ ihe jọgburu onwe ya. Nke a bụ ebe Ass Saver batara na nke ya.
Inye ịnyịnya ibu ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Ọ na - egbochi mmiri site na wiilị ụkwụ gị ịsekwasị na bọmbụ gị. Enwere obere osikapa P iji kwụọ ụgwọ iji nwee bum akọrọ.
Ọ naghị arụ ọrụ dị ka ihe mkpuchi zuru oke, mana ọ dị ọnụ ala ma nwee ike iwepụ ya ngwa ngwa site na nwoke ahụ akọrọ, ihu igwe ihu igwe mara mma, achọghị m iburu ibu na ihe n'akpa m dịka ọkpọkọ, nfuli, nri, wdg. na ebe a bịara na Saddlebag ya uru kacha mma.
Chee maka obere ihe ị nwere ike iburu ebe a: tubes, levers tire, patches, chocolate na ọbụna ego kafe. Enwere ọtụtụ ndị si ebe ahụ anaghị abịa na ọnụ ahịa dị elu. Obere obere, ọmarịcha, nkecha na-amasị m. (Egwu obi ụtọ) Ihe ọzọ anyị na-ekwu maka ya bụ teepu aka.
Ikekwe ụzọ kachasị mma iji gbanwee ọdịdị igwe kwụ otu ebe. Onwe m, ahụrụ m ọcha n'anya, tebulu na-acha odo odo. Echere m na ọ dị mma maka ịgba ịnyịnya.
Ma ọ bụ abụọ. (egwu obi uto) Ugbu a na isi ihe niile ndị na-agba ịnyịnya ígwè kwesịrị ịbụ ezigbo karama mmanụ na ezigbo karama mmanụ. Onwe m, aga m aga maka ndị nwere ike ire ere.
Mana enwere ọtụtụ ebe. You nwedịrị ike ịhazi agba ahụ na mbido nke ndị na-ete mmanụ na wax na ala nke ndepụta anyị nke iberibe igwe kwụ otu ebe. Ma ọ bụrụ na ịnwere nnukwu ndụmọdụ ị chere na anyị kwesịrị ịgbakwunye na ndepụta anyị, hụ na ị ga-etinye ha na ngalaba nkọwa yana iji nweta aka gị na t-shirts ndị a, lelee ụlọ ahịa GCN tupu Nọvemba 28th.
Cheta, ọ bụrụ na ịchọrọ isiokwu a wee nye ya mkpịsị aka aka. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ akụkọ ndị ọzọ na-agba ịnyịnya, lelee nke a: Mmejọ asatọ na-agba ịnyịnya ígwè Anyị niile Na-eme. Kae, Chris na Emma na-eme.
Ihe m na-ekwu abụghị.
Nwere ike ibu ibu naanị site n’ịgba ígwè?
Cygba ígwèbụ obere mmetụta, mmegharị mmegharị ahụnwere ikeọkụ calories na a ọnụego nke 400-750 calories otu awa, dabere naibu ibunke onye na-agba ya, ọsọ na ụdị nkena-agba ịnyịnya ígwè gị'na-eme.Dec. 27 2018
Gba ịnyịnya ígwè nwere ike ịbụ ụzọ dị mma iji ruo ma jigide ibu siri ike. N'isiokwu a, n'etiti ihe ndị ọzọ, anyị chere na anyị ga-egosi gị ụzọ kacha mma iji jikọta ezigbo usoro nri na-agba gburugburu ịgba ịnyịnya gị, ọ bụrụ na ịchọrọ iji ịgba ịnyịnya ígwè wụfuo kilogram ole na ole ma ọ bụ naanị nweta oke ịgba ọsọ kachasị mma anyị nwere olileanya na ị chọta ụfọdụ n'ime ndụmọdụ ndị a bara uru ọ bụghị naanị maka ifelata, kamakwa ịmụta otu ị ga-esi jiri ịgba ịnyịnya ígwè dị ka akụkụ nke ndụ ndụ siri ike na nke ziri ezi ọtụtụ mgbanwe karị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhazi ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịhazi obere ọzụzụ ọzụzụ dị ka isi ọzụzụ ụbọchị dị ka m si dị, mgbe ahụ n'ezie oge ọ bụla dabara, mana iji ọzụzụ dị elu na oke olu na mmụba n'ụzọ, dịka ọmụmaatụ, ị na-agbanye ike na ihe mgbake chọrọ dịkwa elu iji nọgide na-enwe calorie deficit ma n'otu oge ahụ jigide kwesịrị ekwesị ma ọ bụrụ na ebumnuche gị bụ ịbụ ezigbo ụzọ ọrụ. Echerela izu ole na ole tupu ị rute elu gị, kpebisie ike ma ọ bụ na-eche na ọzụzụ ahụ ga-adalata ihe dị arọ - ọtụtụ n'ime anyị chọrọ ihe site na atụmatụ zuru ezu, ma ị bụ onye ntachi obi ma ọ bụ onye na-agba ịnyịnya ígwè.
Loshapụ ibu chọrọ nlebara anya dị ukwuu, ma ọ bụrụ na ọ bụghị itinye uche na nri, karịa onye na-agba ọsọ asọmpi egwuregwu na-achọ ihe ịga nke ọma. Formanrụ ọrụ kwesịrị ilekwasị anya na uche, omume mmega bụ isi na mmepe arụmọrụ yana yana mmega ahụ iji gbaa calorie ndị ọzọ ume nwere ike ibute nhụjuanya na enweghị nsogbu na ọ gaghị enyere aka na oke abụba gị ma ọ bụ ebumnuche ọnwụ gị ma ọ gaghị enyere aka ịrụ ọrụ Abụba Loss na-ewe TimeWater Oz na-eme n'abali ma ọ bụrụ na ịchọrọ idalata ma melite arụmọrụ ịgba ígwè gị mgbe ahụ ịchọrọ ịbanye na Focus na abụba ọnwụ, nke pụtara na-enweghị ndidi. N'otu oge ahụ, ọ pụtaghị na ị ga-enwe nnukwu mmụọ na ebumnuche calorie gị, yabụ na-achọ ihe ruru 300, ọ bụ ụkọ calorie 500 kwa ụbọchị ma ọ bụrụ na ịchọrọ usoro nhụjuanya dị mma nke nwere ike nweta na obere ọzụzụ n'ụzọ, dị ka ọzụzụ bụ isi Nke anyị ga-ekwu maka ya ma emechaa.
Chọ agụụ onwe gị na ụkọ calorie dị elu kwa ụbọchị agaghị enyere aka, ọ ga-emetụta n'ezie arụmọrụ gị na ebumnuche ọnwụ ọnwụ. Zọ kachasị ọsọ iji zuo oke, ọ bụghị nzuzu, bụ ụzọ kachasị mfe iji meebiga ihe ókè, ọ bụghị nzuzu, nke mere na mbọ niile ị ga-enweta iji bulie oke ibu gị na-achịkwa ma nwayọ nwayọ, yana ị dịrị mma mgbe ị na-agba mmanụ, bụ ụzọ kachasị ọsọ iji overtrain, Dịka ọmụmaatụ, ịda mbà n'obi na-adịghị ike usoro Att Atta ntị na nkọwa ugbu a kwesịrị ka a pụta ìhè, mana ọnweghị nọmba na akpịrịkpa ya nkọwa zuru oke nke ahụike gị otu ị si emeso ahụ na uche gị mgbe ụfọdụ bụ ihe ngosi kachasị mma maka ahụike gị na ahụike gị dị ọtụtụ. denser karịa abụba A liter nke akwara arọ Olee ihe enyemaka isii kilogram, mgbe a liter nke abụba adịghị arọ itoolu kilogram. Easierzọ dị mfe iji chee nke a bụ na ọ bụrụ na ị nwere otu olu nke akwara na abụba, abụba ga-atụle 80% nke ihe ahụ ahụ na-eme, ebe mmadụ abụọ nwere ike itu otu, akụkụ ahụ ha nwere ike ịdị iche kpamkpam ọ bụghị naanị ile anya akpịrịkpa na ịdalata, ma ọ bụ na-ele akpịrịkpa ahụ ma ghara ịhụ ọdịiche dị arọ n'agbanyeghị mbọ na-aga n'ihu iji meziwanye usoro ịgba ígwè gị, ịkwesịrị ịkwado ma ọ bụ mee ka ahụ ike gị dịkwuo elu ka ị na-echekwa pasent abụba gị na ahụike dị mma Ọ bụrụ na ị na-enwe nkụda mmụọ na ị na-anwa idalata, ọ nwere ike ịba uru ịchọ enyemaka nke onye na-edozi ahụ iji nyere gị aka tụọ abụba ahụ gị.
Nwere ike idafu abụba ma nweta ahụ ike, nke na-adịghị njọ ma ọlị, yabụ atụla ụkọ ọnwụ dị ka ihe na-adịghị mma maka oke abụba dị mkpa dị iche n'etiti ndị nwoke na nwanyị, ọ dịkwa ihe dịka pasent abụọ na ise n'ime ụmụ nwoke na 10 A na-akọwakarị pasent asatọ na iri na itoolu ebe ahụike dị mma maka ụmụ nwanyị dị pasent iri abụọ na otu na iri atọ na atọ, dabere na afọ, dị ka egosiri na tebụl a site na American Council of Fitness. Obere abụba dị obere siri ike ịchekwa ogologo oge ma ọ nweghị uru ahụike a ghọtara na anụ ahụ dị n'okpuru 8% ntọala. Enwere, na-enwe, ọtụtụ mmetụta na-adịghị mma nke abụba dị ala na ụmụ nwanyị metụtara ọmụmụ na ọmụmụ. Njikọ iji belata arụmọrụ na arụ ọrụ ọgụ, nsogbu obi yana obere ike ogo abụba Isi bụ akụkụ dị mkpa nke ịchekwa ahụ gị niile, yabụ echere m na isi ihe kachasị mkpa bụ na ka anyị na-ahụ ndị ọkwọ ụgbọ ala dị mkpa na ihu anyị, ihe niile afọ gbara gburugburu Ihe omume gbara ọkpụrụkpụ dị ka Tour de France dịka ọmụmaatụ bụ isi abụọ ma ọ bụ atọ n'oge oge yana naanị maka izu abụọ na ngwụcha oge fa Grand Tour dịka ọmụmaatụ ma ha na-ejikwa ndị ọkachamara eme ihe n'ezie ịnagide ọnwụ a. na ọduọ ịgba ọsọ n'ụzọ ziri ezi zu jide ka m chee ihe m na-achọ ikwu abụghị i emomi ha na ị na-agba ịnyịnya ma ọ bụ lelee ya gburugburu ụdị dị ka grail dị nsọ maka otu ị kwesịrị isi lee igwe kwụ otu ebe n'ihi nke ọma , ọrụ ndị a emeela ka ahụ ha ruo oke oke.
You'll ga-enweta ọtụtụ ihe ị na-eme biking gị na ahụike gị niile ma ọ bụrụ na ebumnuche gị bụ ijigide pasent abụba dị mma, ọ bụghị Tour de France iji nweta pasent abụba anụ ahụ n'ụzọ zuru oke n'izu na-eduga na Grand Tour. Nọdụ ala ugbu a Ebumnuche wee kaa akara agam n’ihu gị, nke ekwesighi ịbụ ihe mgbaru ọsọ siri ike. O nwere ike ịdị nfe dị ka ịtọọ oge maka ntopute dị gị nso na ịnwa iti ya kwa izu, ma ọ bụ ọ nwere ike ịnwa ịnwe usoro ịga nke ọma n'akụkụ ụlọ gị echere m na isi ihe a adịghị etinye aka na ibu m na-eche ịnwa ịmepụta ndụ ahụike na ịrụ ọrụ ịgba ịnyịnya ka mma Nyochaa ọganihu gị nwere ike inyere gị aka ịnọ ogologo oge.
Cheta nka echefuru nke idebe akwukwo n’otu ihe m mere n’oge gara aga bara oke uru n’ileba oganihu gi anya, n’eme gi obi uto, ma n’aru aru ma n’uche, tulee ihe ichoro ime site na ibu ibu tupu i bido ebe ahu. bụ ọtụtụ nri fad na atụmatụ ịkọ ụda teknụzụ. Ka anyị chee ya ihu, anyị ga-ahapụ gị ihe mgbagwoju anya karịa ihe ọ bụla ọka ọka ekwesịghị ịnwe ugbu a? Mmiri ara ehi na ọka flakes gị naanị flakes ọka na akọrọ flakes gị ọka flakes nri m na-eche ihe ụwa ga-enweta m na uche kacha mma obibia bụ a kwesịrị isi ike nri na ngụkọta nri management na akara na 300 ka 500 kalori mpe kwa ụbọchị, dị ka akọwara na mbụ ma lee ụfọdụ ndụmọdụ dị mkpa nke ga - enyere gị aka imezu nVeggies a site na ijuju efere ọkara na akwụkwọ nri n'ọtụtụ nri. Mkpụrụ osisi bụkwa akụkụ dị ukwuu nke nri ọ bụla siri ike, ma ọ ga-abara gị uru ma mara pyramid nri ugbu a n'ihi na ịchọrọ ịchọta akwụkwọ nri mkpụrụ osisi na letus dị ka isi nri nri na ọtụtụ nri nri osisi na GCN. bụ nnukwu akụ m anaghị ekwu na ị ga-abụ anụ ọhịa, mana akwụkwọ a nwere ọtụtụ ntụziaka yana Echiche maka otu esi enweta mkpụrụ osisi na ụzọ ndị na-atọ ụtọ na nke okike na nri na nri gị ana m eji nke a na akwụkwọ ndị ọzọ. M na-eme, m ka na-eri anụ, ma ọ dị mma ịnwe anụ anaghị eri anụ ma ọ bụ nri anụ nri ma ọ bụ abụọ n'ime izu niile.
Kedu maka gị? Connor ka na-eri Meyeah ị ka na-eri anụ nwoke mana agaghị m ekwu na ọ bụ ụdị isi nri m, n'ezie m nwere ike iri anụ? ụbọchị atọ ọ bụla na ọtụtụ oge m na-elekwasị anya karịa na mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri na salads mmiri mmiri nwere ike ịgbakwunye ngwa ngwa na-enweghị imeju gị ọzọ, ị ga-achọ iwepụ nchara shuga niile nri nri nri Chips Lovelysweets Ee, nzọụkwụ a naanị ezuola n'ihi na ọtụtụ n'ime anyị, Otú ọ dị pụta iji nwayọọ nwayọọ na-ifelata, òkè akara dị mwute ikwu na, ọbụna ndị kasị mma oriri nwere ike ịbụ oke. Gbalịa na-edozi protein kwesịrị ekwesị n'agbanyeghị obere kalori oriri. Nke a pụtara ịba ụba protein na nri gị kwa ụbọchị ruo pasent 25 ruo 30 nke oriri caloric gị kwa ụbọchị.
Gbado anya na nri protein dịka anụ, azụ, àkwá, agwa tofu na mkpo nri nke ga-ejigide nri protein, jigide ahụ ike gị, ma lekwasị anya na ọnwụ ọnwụ na abụba. Gbalịa igbochi nri ịta nri na-adịghị mma ma lekwasị anya na nri ahụ. Chọpụta isi ihe ndị ị na-etinye n'ime calorie ndị ahụ na-enweghị isi ma mee ihe iji belata ha ma ọ bụrụ na, dị ka m, ọ na-atọ gị ụtọ iri nri zuru oke mgbe ị nọ, zuru ike na hammock gị nke ọma iji dochie nke a nwere ike ịbụ yogọt sitere n'okike, mana lelee otu mmega ahụ ga-esi meju ezi nri ma ọ bụrụ na ihe a niile dị ka gibberish, echegbula onwe gị, pụọ ma nye mmanụ maka mgbatị gị tupu, n'oge, na mgbe.
Echela oge ndị a dị ka ebe ị ga-eri nri gị, nke pụtara na ị nwere nri zuru oke tupu onye na-enye gị ọzụzụ na-eri carbohydrates n'oge mgbatị gị, na mgbe ịmechara mgbatị gị, ị ga-enweta protein dị elu otu mgbake Nkeji. Chekwaa mmejọ ndị a ma ọ nwere ike ị gaghị enweta uru nke oge ọzụzụ ị na-atụ anya inweta na ị nwere ike ịnweta agụụ na-arịwanye elu n'oge ndị ọzọ nke ụbọchị, na-eme ka o sie ike ịnọ na egwu. n'ọnụ Belata ihe oriri carb gị ntakịrị na ara na mgbake ụbọchị ndị a ị nwere ike ịnwe mgbatị ahụ na obere carbohydrates dị ntakịrị karịa ka ị na-emebu na nke a agaghị enwe mmetụta dị ukwuu na ahụike gị rubriz ụbọchị tupu ụbọchị mgbake - ọ bụ nri obere obere obere nri maka nri abalị ma hụ otu ị ga - esi jide n'aka na ị ga - ehi ụra zuru oke, na-eche ihe dị ka elekere asatọ n'abalị m na-echeta ụra ụra nwere ike igbochi oke abụba maka mgbake, akụkụ niile nke mmega ahụ ị kwesịrị iche echiche banyere mgbe ị na - eri nri gị nri na-eme atụmatụ ha gburugburu mgbatị gị erum kama ịrapagidesi ike na nri nri a na-emebu, dịka ọmụmaatụ mgbe ịlaghachitere n'ụgbọala ị nwere ịmị ọka protein wee chere dị ka awa ole na ole ruo mgbe nri ehihie ma ọ bụ nri abalị.
Gini na aghaghi iri nri gi ozugbo mgbatị gi ma jiri ha di ka ndi okacha amara, ya mere weghachite mgbake i ghaghi itinye aka. Ugbu a tinye ọzụzụ aglycogen dị ala, ọ bụ ihe omume gị kwa izu. Gbalịa ịkwọga 30 ruo 60 nkeji oge tupu nri ụtụtụ, mana hụ na ị nwere nri ụtụtụ gị mgbe emechara nnọkọ ahụ.
Ugbu a enwere ihe akaebe na ọzụzụ dị otu a na - ebu ọnụ nwere ike inyere gị aka ịkwụsị abụba ma kwado mbọ gị na - agba, ma ọ bụghị maka mmadụ niile. Ọ bụghị maka m. Akpọrọ m ya asị na anaghị m eji ya eme ihe na h na usoro mgbatị m nwere ike ịrụ ọrụ maka gị, mana ọ bụrụ na ọ naghị eme ka ọsụsọ gị, jikọta oge gị ma gbalịa ịzụ ahụ gị n'ụzọ dị iche, nke a nwere ike ịpụta ịme mbọ dị iche iche ma ọ bụ naanị ịga ụzọ dị iche iji nweta ụzọ ọzọ siri ike. 'anwansi, ma maka ọtụtụ n'ime anyị ndị na-agbanye oge, anyị enweghị oge ịkwọ ụgbọala awa ise ma ọ bụ isii kwa ụbọchị, nke bụ ihe m na-eme mgbe niile, ọ bụ 30 sekọnd nke ịgba ọsọ na oche Dịghachi ugboro anọ maka sekọnd 30 ma gbakwunye ugboro ugboro ka ị na-arụ ọrụ.
Enwere otutu mgbatị dị mkpụmkpụ na ọwa gcn ọ bụrụ na ịchọrọ ịbanye n'ime ihe ndị a, tinye ụfọdụ mgbatị gị na mgbatị gị na usoro Arab na njedebe nke ike ya ị ga-akwụkwu ụgwọ maka obere arabic gị ngwa ngwa ị nwere ike Ime nke a na njem mmadụ, mana ị na-enweta Buddi gị Ọ bụ ụzọ dị mma iji bulie ijeụkwụ ahụ wee kụrụ ụfọdụ ebumnuche a ga-enweta. Echere na ederede a enyerela gị aka ịghọta otu ị ga-esi felata na ụzọ dị mma ma na-adigide.Ọ bụghị naanị ịlaghachi azụ ma tụleghachi ma cheta na ahụ ike gị na ahụike gị bụ obere akụkụ nke ọtụtụ ihe, niile metụtara arụmọrụ gị Onye na-agba ịnyịnya ígwè na-atọ ụtọ ịnyagharị dị ka akụkụ nke ndụ ndụ siri ike. Ọ ga-amasị anyị ịmata ihe ị chere banyere isiokwu ndị a.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla biko hapụ ha na nkwupụta
Kedu ụdị ụdị usoro 10 kacha elu?
TOP 10 ỌRR B BI
Have kpebiri ịzụta ụzọ ịnyịnya ígwè mbụ gị, n'ụzọ dị ịtụnanya ị werela nzọụkwụ mbụ gị n'ime ụwa buru ibu karị, mana ịzụrụ igwe kwụ otu ebe mbụ gị nwere ike ịnwe ntakịrị ihe na mgbagwoju anya ebe ha dị ka ụdị dị iche iche nke ihe dị iche iche nwere ihe dị iche iche. gafere, yabụ anyị nọ n’isiokwu a aga m enye gị ntuziaka bara uru ma gwa gị ihe ị ga-achọ na ihe dị iche na m nwere obi ụtọ banyere ịgba ịnyịnya ígwè, yabụ ihe ọ bụla na-eme ka ọtụtụ mmadụ banye igwe kwụ otu ebe na agụụ ahụ niile mma gbawara. Ọ bụ ya mere anyị ji jikọọ ọnụ na Decathlon, ha nwere igwe kwụ otu ebe zuru oke nke nwere ọtụtụ atụmatụ dị iche iche ma ha dịkwa oke ọnụ ahịa maka ego, nke pụtara na nke a bụ ebe kachasị mma ka m gosi gị ihe niile ị nwere ike ịme na m chọkwara kitesurf kite ohuru gbakwunye na echiche nke jiri otu okwute wee nwuo nnunu abuo. Ihe mbụ ị ga - eme bụ ịchọpụta ego ole ịchọrọ imefu, mana ego ole ka ị ga - emefu nke ọma enweghị azịza ziri ezi na ajụjụ a ma a bịa n’ịzụ igwe kwụ otu ebe, mana ihe ị ga - amata bụ na elu àgwà ntinye-larịị n'okporo ụzọ anyịnya igwe na-amalitekarị na gburugburu 260 oro ma ọ bụ £ 250 dị ka nke a na mgbe ahụ ka ị ga-esi na ego ndị ọzọ na-adịkarị mfe na stiffer na ihe ndị dị na okpokolo agba ndị a na-adị mfe ma nwee ọkaibe karịa gburugburu 600 euro ị nwere ike nweta ọtụtụ igwe kwụ otu ebe na-atụ egwu ego, ọ na-abụkarị ihe m ọ bụ aluminom mebiri ụfọdụ ọfụma ntinye dị ka ikekwe diski breeki na igwe kwụ otu ebe na ụdị ngwa a nwere ike ị nwere ike, ị nwere ike ịmara n'ezie na ugwu ma ọ bụ ugwu nwere ike ịbụ ma gbaa agbụrụ ole na ole n'ụgbọ ịnyịnya na ụdịdị a dị iche iche amaara m nke ahụ, n'ihi na enwere ihe niile m mere n'ụgbọala okporo ụzọ mbụ m, m ga-atụ aro ka ị ghara iji ego gị niile na igwe kwụ otu ebe naanị, mmefu ego na ohere niile dị mkpa mmanụ dị ka akpụkpọ ụkwụ na pedal, uwe na ihe niile ị ga-ebu ụzọ mkpa ka ị tụlee mgbe ị na-ahọrọ igwe kwụ otu ebe, ihe ndị agbakwunyere na ya site na mkpokọta okwu maka breeki na gia bụ otu ugbu a enwere ndị nrụpụta dị iche iche nke otu Campagnolo, SRAM microchip na ikekwe Shimano a kacha mara amara, nke na-anọghị na ụdị otu a na-ahazi n'ọkwá ma ọ bụ ọkwa na-abịa mgbe ị na-arịgo usoro ndị isi nke otu, ha ga-adị oke ọnụ ma ihe ndị ahụ na-adịwanye mfe ị na-enwetakarị ọrụ ọzọ. emeputara ha site na ihe ndi ozo ma ndi ozo gha adi nma ugbua ugbua ma anyi abanyela ugbua na uzo ndi ozo di ala na ndi isi, ihe omuma a nke Shimano Sora, nke bu uzo nke abuo nke Shimano. a na-ahụkarị igwe kwụ otu ebe gburugburu mkpado ego £ 500, Shimano Sora nwere ike ịkwaga ndị otu na-aga n'ihu n'ihu igwe kwụ otu ebe ya nwere Shimano na edere m ya ugwu n'ime m o r Carall ebe m na-agba ịnyịnya ya agbụrụ ole na ole mana otu n'ime ihe ị ga-eburu n'uche bụ oke gia nke groupet. Igwe kwụ otu ebe a nwere kaseti 1132 na azụ nke m ga-akwado maka igwe kwụ otu ebe mbụ gị na ihe kpatara ya. nke ahụ bụ na 32 ezé gia na azụ nke cassette bụ n'ezie bara uru maka Ugwu bụ.
Nke a pụtara na site na ịgbanye ụkwụ gị karịa, ị nwere ike ịnweta ọkwa dị elu karịa na ọ ga - eme ugwu ka ọ dị ntakịrị. Nke a dị iche na ụfọdụ anyịnya igwe na-abịa na ubé ike cassette: 28 ntị na yinye set now nwekwara dị iche iche nha nke yinye mgbaaka, ihe m ga-akwado maka gị mbụ ụzọ igwe kwụ otu ebe bụ kọmpat yinye setịpụrụ na a 50:34 dị ka anyị nwere ya ebe a na maka otu ihe ahụ m ga - akwado 32s, azụ ahụ na - eme ka ugwu nta dị mfe ma ọ bụrụ na ị bụ onye mbido. Naanị ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-amalite ụzọ biking ma chọọ ịnwe mgbatị nke nwere ike inyere gị aka ịrị ugwu ndị ị chọrọ, nnukwu azụ na obere azụ ntas ndị a kpọtụrụ aha na-abụ akụkụ nke ìgwè ahụ ma n'ozuzu ya, e nwere ụdị brek abụọ dị iche iche dị ka ị pụrụ ịhụ na igwe kwụ otu ebe a na brekị na breeki ndị a na-efu obere karịa rim brek mana gịnị ma ọ bụrụ na i bi ma ọ bụ na ị ga-aga ebe ugwu? na ugwu ugwu m ga-asị na ha bara uru maka mgbatị ahụ n'ihi na ha na-enye breeki siri ike karị, nke na-adịgide adịgide karị na mmiri mmiri ma n'ozuzu ha nwere njikwa ka mma. Ekwesịrị m ikwusi ike na brek brek na-eji ha eme ihe zuru oke. iji merie Tour de France maka afọ 100 ma ha nwere uru nke ịdịtụ ọkụ karịa breeki ndị a dịka ihe eji eme ụlọ ahụ nwere nnukwu mmetụta na ogo ogo nke igwe kwụ otu ebe na ihe ndị kachasị ewu ewu Aluminom Nchara na carbon eriri si gburugburu 250 ka 1,000 pound euro na dollars, ọtụtụ n'ime anyịnya igwe ị nwere ike ịhụ na-mere si aluminum alloys na nke ahụ bụ oké n'ihi aluminom bụ a nnọọ vasatail ihe onwunwe na bụ fechaa na-enwe ezi ike-na-arọ ruru, na ihe mere mgbe eji na ụgbọelu, ọ na-eguzogide ọgwụ na-emebi emebi ma nwee ike ịdị na-efu nke ukwuu karịa eriri carbon nke pụtara na igwe kwụ otu ebe nwere ike ịghọ ihe karịrị otu puku euro karịa ọnụ. ị malitere ịhụ igwe kwụ otu ebe carbon-fiber dị ka vanreisel edr 105 ma ọ bụ abụ abụ, dị ka ha na-ekwu n'ihu, ebe anyị nọ ugbu a.
Carbon fiber na-adịkarị mfe ma sie ike karịa aluminom na nchara maka ọdịdị ka mma carbon fiber bụ nnukwu ihe maka ịme ịnyịnya ígwè ma ọ bụrụ na mmefu ego gị anaghị ejupụta eriri carbon na-echegbula onwe m na ụzọ ụgbọ okporo ígwè mbụ m bụ aluminom mana ezigbo njirimara bụ Aluminium igwe nwere ahihia nke Carbon nke a na-ebelata ibu nke a na-eme ka ndu ya sie ike karie ya ma o na-ebelata uzo uzo ma na-agbacha site na aka na-ahọrọ akara a ma ama bu ihe kwesiri ka ị mara na e mebere ya ma nwalee ya. a siri ike akwụkwọ ikike agwụ na etiti na ndị bara uru na-achọ bụ ndị taya nwechapụ ihe ndị merrier m ga-ekwu dị ka nke a na-enye gị ukwuu egosipụta. You nwere ike ịdaba na taya sara mbara ma ọ bụrụ na-amasị gị, ọ bụrụ na ịchọrọ ụzọ ndị furu efu ma nwee obere njem ị nwere ike itinye ihe dịka mudguards, akpa akwa na ọtụtụ ngwa ndị ọzọ yana nkọwa zuru ezu na etiti ahụ bụ ihe nkwado dị n'ala - ndị a bụ biarin nke nke igwe kwụ otu ebe na igwe na-agba n'èzí na-enweta akara ego na akwụkwọ m n'ihi na ndị a na-achọ obere ndozi ma na-adịru ogologo oge. Ana m agwa gị ugbu a gbasara wiil Imean dị ka ụdị isi akụrụngwa na ịnyịnya ígwè ọ bụla, ugbu a, igwe kwụ otu ebe na-abata na-abanyekarị n'ogo ụkwụ na-abanye n'ihi na ọ bụ ihe kachasị ewu ewu na ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-agbadata ala ahụ. Ha na-abanyekwu n'egwuregwu ahụ ma gbanwee ha maka ihe dị mfe, nke siri ike, na ikekwe karịa aerodynamic, ma na ndị a mma arụmọrụ àmà na wiil tinye na-eri na Ya mere na-d The ala price ma ọ bụ ntinye-larịị anyịnya igwe na-abịa na a dị mfe wheel, ma ọ bụrụ na ị na-achọ wiil gị bi ke na-achọ na ihe m na-atụ aro, a n'ezie elu anwụrụ ọkụ nọmba dị ka nke a na-enyere aka ime ka wheel siri ike na ndị ọzọ siri ike m ga-atụ aro ka ị na-ele anya na rim obosara. N'ikpeazụ ị chọrọ rim ndị kwesịrị ekwesị maka wider na taya, ya mere a ubé wider rim obosara dị ka 25mm taya ma ọ bụ 28mm taya na-enye ntakịrị ihe nkasi obi, a nta ọzọ adịgide na ha nwekwara ubé ala Rolling eguzogide, nke pụtara na ị nwere ike nọkwasị otu ọsọ na a obere obere mgbalị.
Ugbu a, m ga-enye gị ụfọdụ ozi ndị ọzọ dị mkpa ịchọrọ ịma mgbe ị na-azụ ụzọ ịnyịnya ụzọ mbụ gị. A na-eji igwe eji eme njem eji ejiji eme ihe, nke pụtara na ọ bụ ihe dị mma maka ha inwe ahụ erughị ala na-enweghị obere akpa, na sadulu. nkasi obi dịkwa oke onwe ya Ya mere, ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị maka ndị na-agba ịnyịnya ịgbanwe ihe mgbe mgbe. Ọtụtụ ịnyịnya ígwè na-agba ọsọ anaghị abịa na pedal, ọ bụ ezie na ụfọdụ igwe kwụ otu ebe nwere ihe ngosi pallet.
Ọ bụrụ na ịnwe ogologo njem ma ọ bụ mee egwuregwu EOB anyị na-akwado ịkwalite ụfọdụ pedal na akpụkpọ ụkwụ na-enweghị mkpụmkpụ n'ihi na ndị a na-enye gị ohere ịda mba ma jiri ụkwụ na-aga njem iji mee ka ị nwekwuo ọfụma You nwekwara ike ịnweta igwe kwụ otu ebe ụmụ nwanyị, biko tọọ inwe otu etiti ma dị iche iche na kọntaktị iji nabata anatomical iche n'etiti nwoke na nwanyị, n'ihi ya, ị ga-esi a kpọmkwem n'akụkụ sadulu nke nwere ubé mkpumkpu ị ga, narrower handlebars na ubé mkpumkpu cranks, ma nke a bụ nditịm mkpa. Nwere ike ịnwe mmasị na gravel ma ọ bụ igwe eletrik na-agwakọta agwakọta .Ndị a bụ ịgba ịnyịnya ígwè na mgbanwe ole na ole iji mee ka ha nwekwuo ike ka ị nwee ike ịnwekwuo taya na nnukwu olu dị ike karị-ụzọ mfe Kwadobe ị pụrụ ịhụ na oke sprocket na cassette ebe a na diski brek na nke ahụ pụtara na ị nnoo nwere a ụzọ bike na dobe Ogwe na bụ nnọọ ngwa ngwa na ụzọ karịa a igwe kwụ otu ebe kamakwa na gravel ma ọ bụ na-agbaji agbaji agbaji, nke ị na-achọghị ime n'okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè dị mma maka ndị na-agwakọta ala na-achọ njem, ma eleghị anya ị na-ebu igwe eletriki ole na ole, ma ọ bụ ma eleghị anya ọ bụ naanị ndị na-achọ ọrụ na-achọghị ịrapara n'okporo ụzọ .
I nwekwara ike gbanwee taya ochie maka ụfọdụ mkpa, nke nwere ụzọ ụzọ abụọ, ma ị nwere igwe kwụ otu ebe, enwere m nnukwu mmasị n'ụdị ịnyịnya ígwè ndị a, ọgba tum tum na-abanye ihe dị ka narị pam ise ma ọ bụ narị euro isii. Ndi nwamba nwamba mere ihe omuma nke ichota uzo m ma otutu ihe ndi ozo ma echefuru m na achọrọ m ya ma oburu na ichoro m obi uto akwukwo a ma choputa ya ihe omuma ma biko nye anyi ihe dika na ugbu a ị kpebiri na igwe kwụ otu ebe ị chọrọ, eleghị anya ị ga-achọ ịma otu esi enweta nha ị chọrọ, ọ dabara nke ọma na anyị nwere akụkọ gbasara nke a na ụda nke ọdịnaya ndị ọzọ bara uru bara uru. M na-ala ulo ugbua na egwuru egwu m
Ndi igwe n’eme ka oku gbaa oku? Eeh. Ọ bụ ezie na gịafọakwara anaghị arụ ọrụ dị ka quads gị ma ọ bụ mpịakọta gị mgbe ị na-agba ịnyịnya, manaịnyịnya ígwè siaerobic ọdịdị pụtara na ị na-ere ọkụabụba. g.
Kedu ihe na-ere ọkụ karịa ịgagharị ma ọ bụ ịgba ịnyịnya ígwè?
Cgba ígwè na-enwu ọkụkalori
The nkezina-eje ijeọsọ nke 5 km / h (3 mph) na-eme ka nkezi mmadụọkụihe dị ka 232 kcal kwa awa.Cygba ígwèna ọsọ ọsọ nke 20 km / h (12 mph)ọkụihe dị ka 563 kcal kwa awa. Ma ihe dị iche dị ọbụna karị mgbe anyị na-abawanye ike.Ọkt 17 2018
Cygba ígwèotuaka elekerekaụbọchịmaka ọnwụ ọnwụ bụ ụzọ magburu onwe ya iji bulie ọnwụ. Onye dị otu narị na iri abụọịgba ígwèmaka iheaka elekereke ufọt ufọt osisi ọkụ ihe 650 calories. Ọbụnaịgba ígwèNkeji 30 aụbọchịanọgide na otu afọ nwere ike ọkụ ihe karịrị 100,000 calories na-ebute ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 30 pound nke ọnwụ.Jul 25. 2020 g.
Kedu igwe kwụ otu ebe na ụwa?
Kawasaki Ninja H2R (Top Speed) - 248,5 mph
Ninja H2R bụ n'ezie pasent 50 dị ike ma nwee obere mkpumkpu ụkwụ dị obere karịa 5mm karịa mgbe ọ bụla n'okporo ámá-iwu H2, nke na-ewepụta 197BHP nke ike. Naigwe kacha mma n'ụwa. Ọ bụrụ na anyị na-atụle legality, Kawasaki Ninja H2 bụ na ndị kasị n'okporo ámá-iwu ọgba tum tum ị ga-enweta.
'Cygba ígwèbụ ihe omume dị ala, ”ka Shroyer na-ekwu. Nke a pụtara naịgba ígwèna-egbochi nrụgide na-ebu ibunkwonkwo, dị ka hips gị,ikpere, na ụkwụ. Na mgbakwunye, mmegharị ahụ na-enyere aka ite mmanunkwonkwo, nke na-ebelata ihe mgbu na nkwesi ike.10.07.2019
Cycgba ígwè ọ ka mma karịa ịgba ọsọ?
Ọnụ ọgụgụ nke calorie ị na-ere na mmega ahụ dabere na ike na ogologo oge ị na-eme ya. N'izugbe,na-agba ọsọna-erekwu caloriekarịa ịgba ịnyịnyan'ihi na ọ na-eji akwara ndị ọzọ eme ihe. Otú ọ dị,ịgba ígwèdị nro karịa ahụ, ma ị nwere ike ime ya ogologo ogema ọ bụỌsọ ọsọkarịaị nwere ikegbaa ọsọ.21.01.2020
ugboro ole nke inine n’ubochi
Ebee ka m nwere ike zụta gia otu ndị ọrụ ịgba ịnyịnya ígwè?
Ugbu a ị nwere ohere ịnweta ngwongwo pro ndị otu egwuregwu kacha mma nwere. Anyị ihe bụ ndị mbụ na 'pro-ekesịpde' si ọkachamara ìgwè, na iso nke ma uwe, ukporo uwe, ngwa, akụrụngwa na anyịnya igwe. Anyị na-ere ngwa igwe ịgba ígwè site n'aka ndị nrụpụta ndị na-akwado ndị otu egwuregwu ịgba ịnyịnya.
Kedu ụdị ihe ịgba ígwè na-enye nke ọma?
ProOwnedCycling na-enye akwa ịgba ịnyịnya ígwè mbụ, gia na igwe kwụ otu ebe site n'aka ndị ọkachamara ịgba ígwè na ndị otu ịgba ịnyịnya ígwè. Anyị na-ahụ mgbe niile ka ị nweta ngwaahịa dị elu, n'ihi ọtụtụ afọ anyị nwere ahụmahụ.
Kedu weebụsaịtị kacha mma maka ịgba ígwè?
ProOwnedCycling na-enye akwa ịgba ịnyịnya ígwè mbụ, gia na igwe kwụ otu ebe site n'aka ndị ọkachamara ịgba ígwè na ndị otu ịgba ịnyịnya ígwè.